🥇 ▷ Mortal Kombat X oo loogu talagalay iPhone, talooyin iyo tabaha loo dagaallamo ✅
Mortal Kombat X oo loogu talagalay iPhone, talooyin iyo tabaha loo dagaallamo
Khiyaamada dagaalkaaga Mortal Kombat X
Imaatinka ‘Mortal Kombat X’ ee iPhone ayaa calaamad weyn u ah kulamada fiidiyowga mobilada. Mid ka mid ah sagas ugu dhiigga badan uguna aqoonsan warshadaha ayaa leh a nooca weyn ee loogu talagalay iPhone halkaas oo sawirada cajiibka ah lagu daro nidaamka xakamaynta la waafajiyey xayiraadaha taleefanka gacanta.
Haddii aad rabto inaad barato sida loo yaqaan dhaqdhaqaaqa gaarka ah ee Scorpion, Sub-Zero iyo shirkada, si toos ah ugala soco iPhone-kaaga, ka dibna fiiro gaar ah u yeelo talooyinka soo socda iyo tabaha kaa caawin doona inaad ku guuleysato dagaalka tartankii ugu rabshadaha badnaa ee ciyaaraha fiidiyowga.
Taabo oo xakamee riix
Aan lahayn badhamo ay ku fuliyaan dhaqdhaqaaqyada, Mortal Kombat X oo loogu talagalay iPhone waa inaan si fiican u maareynaa swipes-ka isla markaana taabashada shaashadda.
Haddii aad laba farta korkaaga ku cadaato dagaalyahanku wuxuu xannibayaa weerarka cadowga.
Haddii aad fartaada u riixid dhinaca ka soo horjeedda waan weerari doonnaa.
Tilmaamo silsilado ku filan oo waxaad hoos u dhigi kartaa koontaroolka si aad u sameyso ku dhufo gaar ah.
Iyada oo ku xidhan astaamo kasta dhaqdhaqaaqa way kala duwanaan karaan. Sida ku jirta nooca Mortal Kombat ee loogu talagalay dadka loo yaqaan ‘conrtles’, furaha ayaa ku jira waqti iyo saxnaan ka hor inta uusan fulin amar kasta.
Dilalka ayaa sidoo kale jira
Caanka ah dharbaaxo dhiig leh oo aan ku dhameyn karno dagaal kasta waxay ku sugan yihiin Mortal Kombat X. Nooca iPhone waxaa ku jira labada Dhimashada iyo istaroogyada raajada ee la yaab leh mana jiro faafreeb.
Ha ku khasaarin qashinka
Sida cayaaraha kale ee bilaashka ah, Mortal Kombat X waxay leedahay gadashada gudaha u baahan adeegsiga lacag gaar ah, kiiskan Koins (Ingiriisiga “qalin”, lacag). Keydso qadaadiicdan iyo haddii aad kubixinaysid lacag dhabta ah iibsashada baakadaha Koins maxaa yeelay iyagu waa kuwo aad u faa’iido badan si kor loogu qaado dagaalyahannadaada oo kor loogu qaado waxqabadka guud ee dagaalyahannada.
Abuur koonto WBPlay
Walaalaha Warner ayaa ku siinaya Dhammaan faa’iidooyinka iyo abaalmarinnada oo dhan haddii aad abuurto koonto WBPlay oo waad isla xisaabtantaa. Intaa waxaa sii dheer, waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad sii waddo ciyaarta ka socota aaladaha kale adoo isla isla xisaabtan. Waxaad ka heli kartaa xuruuf qarsoon iyo waxyaabo kale oo dheeri ah oo aad ku raaxeysan karto oo keliya akoonkaaga WBPlay.
Mortal Kombat X waxaad u dagaallami doontaa kooxo sidaas ha isku deyin inaad ka adkaato dhamaan kuwa kaa soo hor jeeda hal dagaalyahan, bartaan sidii aad isaga kaashan laheyd isbedelka waqtiga u dhexeeya hal dagaalyahan iyo mid kale si aad uga sii gudubto dagaaladaaga.
Markasta oo ay tahay inaad wajaho koox cusub waa inaad maskaxdaada ku haysaa talooyinkan oo runti waxaad noqon doontaa mid ka mid ah dagaalyahanada waaweyn ee Mortal Kombat X loogu talagalay iPhone, ubax dhiig leh iyo madadaalo madadaalo ah oo sidoo kale laga ciyaaro moobaylka.
Ka soo dejiso Mortal Kombat X App Store
Haddii aadan ciyaartan wali haysan ciyaarta sheeko sheeko sheeko oo loogu talagalay iPhone iyo iPad, waxaad ku rakibi kartaa adiga oo maraya xiriirinta tooska ah ee soo dejinta, kana socota App Store, oo aad ka heli doontid hoosta.
MORTAL KOMBAT X wuxuu ku jiraa App Store, wuxuu ubaahanyahay macruufka 6.0 ama wixii ka dambeeya. Waxay la jaan qaadayaan iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad iyo iPod taabasho. Barnaamijkan waxaa loo habeeyay iPhone 5. Waxaa lagu heli karaa luqadda: Ingiriisiga.